...जसले बोलेरै बनाए रेकर्ड ९० घण्टा निरन्तर प्रवचन
कुञ्जरमणि भट्टराई शनिबार, १६ चैत २०७५
समान्यतया तपाईं निरन्तर बोल्नुपर्यो भने कति घण्टा बोल्न सक्नुहुन्छ ? पाँच, सात वा १० घण्टा । तर नुवाकोटका अनन्तराम केसीले भने आफ्नो अद्भूत क्षमता प्रस्तुत गर्दै निरन्तर ९० घण्टा दुई मिनेट बोल्दै विश्व कीर्तिमान कायम गरे ।
हाल गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डको ‘लंगेस्ट स्पिच म्याराथन’ विधामा नेपालका अनन्तराम केसीको नाम भेटिन्छ । गिनिजमा यस विधामा सन् १९६४ मा तत्कालीन क्युवाका राष्ट्रपतिले निरन्तर २७ घण्टा ३२ मिनेट बोलेर रेकर्ड बनाएका थिए । त्यसपछि निरन्तर रूपमा तोडिएको कीर्तिमानमा स्पिच म्याराथन विधामा २०१८ को रेकर्डमा भने अनन्तराम केसीको नाम भेट्न सकिन्छ ।
लगातार ९० घण्टा बोल्नु सामान्य कुरा होइन । उनले लामो समय निरन्तर बोलेर आफ्नो अद्भूत क्षमता प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई विश्वसामु परिचित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गराएका छन् । उनले भारतको केरलाका केपी भाल्सा राजनको ८१ घण्टा १६ मिनेटको कीर्तिमान तोडेका हुन् । उत्प्रेरणा, स्मृति र बोल्ने कलामा पोख्त अनन्तरामले समय–समयमा जीवन दर्शन, मेमोरी पावर अर्थात् स्मरण शक्ति लगायतका विषयमा प्रवचन दिँदै आएका छन् । उनले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतकै लामो समय बोल्ने विधामा विश्व किर्तिमान कायम गरेका हुन् ।
योग साधनामा लागेका अनन्तरामले यसअघि पनि प्रवचन दिएका थिए । २०७४ असोज १९–२२ सम्म गिनिज वल्र्ड रेकर्डको नियम अनुसार ८० घण्टा निरन्तर प्रवचन दिएका थिए । तथापि उनले राखेको त्यो रेकर्ड प्रमाणीकरण भएन । उक्त रेकर्डका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउन असफल भएपछि गल्ती सुधार्दै काठमाडौको गोकर्णेश्वरस्थित इस्टपोल स्कुलमा आयोजित कार्यक्रममा २०७५ भदौ ११ गतेबाट प्रवचन दिन सुरु गरेका अनन्तरामले भदौ १५ गते नयाँ कीर्तिमान बनाएर यस विधामा नेपालको नाम राखेका हुन् ।
लंगेस्ट स्पिच म्याराथनअन्तर्गत ८१ घण्टा १६ मिनेट प्रवचन दिँदा विश्व कीर्तिमान कायम भएको थियो । गिनिज वल्र्ड रेकर्डका प्रतिनिधिले पुरानो रेकर्ड तोडिएर नयाँ रेकर्ड कायम भएपछि त्यतिमै रोकिँदा पनि फरक नपर्ने बताएका थिए । उता आयोजकले पनि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको भन्दै ८५ घण्टामा नै रोकिन सुझाव दिए । तथापि उनले आफ्नो ९० घण्टा बोल्ने लक्ष्य पूरा गरेरै छाडे ।
अनन्तरामले यसअघि २०६५ वैशाख १५ गते इलाममा निरन्तर १३ घण्टा प्रवचन दिए । त्यस्तै २०६६ मा हेटौँडामा निरन्तर ३६ घण्टा ३६ मिनेट बोलेर अर्को कीर्तिमान बनाएका थिए । विद्यालयमा पढाउने, विभिन्न स्थानमा प्रशिक्षण दिने लगायतका काम गर्दागर्दै बोल्नमा अभ्यस्त भएकाले रेकर्ड राख्न सम्भव भएको उनी बताउँछन् ।
जीवनमा उनकोे सपना थियो सेनामा भर्ती हुने । सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट र नेपाल प्रहरीमा पनि आबद्ध हुने प्रयत्न गरेका अनन्तरामको इच्छाले मूर्त रूप पाउन सकेन । उनका अनुसार सायद, पिता राजनीतिज्ञ भएकाले उक्त अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्यो । त्यसपछि भने उनी २०५२ सालमा आफ्नो औपचारिक शिक्षाको जग बसालेको भूमेदेवी उच्च माविमा शिक्षक बने र २०५९ सम्म प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहे ।
सिंगो नेपाल र भारतका छ प्रान्त गरी १२ हजार पाँच सय किलोमिटरको पैदल यात्रा गरेका अनन्तरामले निरन्तर भाषण गरेर कीर्तिमान समेत राख्न थाले । नेपाल पैदलयात्राकै क्रममा उनले तीन घण्टा प्रवचन दिएका थिए ।
मुलुकमा द्वन्द्व चर्कियो, राजा विरेन्द्रको वंश नाश भयो अनि विविध घटना हुन थाले । यी कुराले उनलाई दिक्क बनायो र योग साधनार्फ लागे । त्यसपछि उनले योगा र प्राकृतिक चिकित्सको अध्ययन गरे । उनले नेपाल र भारतमा योग साधनाका तालिम लिए । र उनी व्यावसायिक रूपमा प्रशिक्षण दिन पनि थाले । योग साधनाका क्रममा उनले योगी विकासानन्दसँग पनि सहकार्य गरेका छन् । योग साधनाकै क्रममा उनले पैदलै विश्व भ्रमण गरी फरक विधामा कीर्तिमान राख्ने योजना बनाए ।
पैदलयात्रामा विश्व भ्रमण
सिंगो नेपाल र भारतका छ प्रान्त गरी १२ हजार पाँच सय किलोमिटरको पैदल यात्रा गरेका अनन्तरामले निरन्तर भाषण गरेर कीर्तिमान समेत राख्न थाले । नेपाल पैदलयात्राकै क्रममा उनले तीन घण्टा प्रवचन दिएका थिए । जुन प्रवचनमा अध्यात्म र भ्रमण विस्तार गरेका थिए । सिंगो नेपाल र भारतका छ प्रान्त गरी १२ हजार पाँच सय किलोमिटरको पैदलयात्रा गरिसकेका छन् । हाल गृहस्थी जीवनमा भएकाले पैदलयात्रा रोकेका अनन्तरामले रिटायर्ड लाइफमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बनाएका छन् ।
बोलेरै सेञ्चुरी मार्ने लक्ष्य
उनले आफूले राखेको रेकर्ड आफैँ तोड्ने योजना भने बनाइनसकेको बताए । भन्छन्, ‘अहिले नै रेकर्ड तोड्ने कुनै योजना बनाएको छैन । तर बोलेरै सेञ्चुरी मार्ने सपना लिएको छु, त्यो त पूरा गर्छु नै ।’ विश्व कीर्तिमान कायम गरेपछि उनलाई आफन्त, चिनजानका व्यक्तिले बधाई दिए । उनी भन्छन्, ‘विश्व रेकर्डपछि बौद्धिक वर्ग, आफन्त, चिनेजानेका साथीहरूले नेपालको नाम राखेकामा बधाई दिनुभयो । त्यस्तै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउनुभयो । केही ठाउँबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । नेपालीले बोल्नबाहेक के जानेको छ र ? भन्ने प्रतिक्रिया नआएको पनि होइन ।’
उनले स्थानीय सरकारबाट सम्मान स्वरूप पाँच लाख रूपैयाँ पुरस्कार पनि पाएका छन् । ‘गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट तीन लाख, टोखा नगरपालिका र शिवपुरी गाउँपालिकाबाट एक–एक लाख प्राप्त भएको छ । राज्यले नागरिकको प्रतिभाको संरक्षण गनुपर्ने हो । तर महत्व नदिएको जस्तो लाग्छ’, उनले भने ।
प्रतिभा क्रान्ति हुनुपर्छ
‘युवाहरूमा भएको प्रतिभा कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रस्तुत हुनुपर्दछ । हामी देश समृद्ध भएन भन्छाै‌, त्यसका लागि युवाको मनोशक्ति बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिभा क्रान्ति हुन्छ । हामीले आफूलाई जितेपछि जस्तो पनि काम पनि गर्न सक्छौँ । नयाँनयाँ कीर्तिमान राख्दै गएपछि देश आफैँ समृद्ध बन्दै जान्छ । मैले एउटा उदाहरण पेस गरेको हुँ । आफूसँग भएको क्षमता प्रष्फुटन गनुपर्दछ भन्ने जागरणमा लागेको छु’, उनी भन्छन् ।
२०७३ बाट माइन्ड एन्ड मेमोरी पावर ट्रेनिङ सेन्टर मार्फत प्रशिक्षण गराइरहेका अनन्तले ‘स्मृति विज्ञान र सफलता सूत्र’ नामक दुई पुस्तक समेत प्रकाशन गरेका छन् । उनी विभिन्न समयमा जीवन दर्शन, तनावबाट छुटकारा पाउने तरिका लगायतका विषयमा अनुभव साटासाट गर्न विभिन्न स्थानमा पुग्ने गर्दछन् । निरन्तरको योग साधना त छँदै छ । उनलाई भारतको एक विश्वविद्यालयले डाक्टरको उपाधि पनि दिएको छ ।